Mpempe akwụkwọ na ọkpọkọ laser ọnwụ igwe
Igwe ọkụ Laser nwere sistemu nchekwa mpempe akwụkwọ akpaka
Igwe nchara nchara laser ọnwụ igwe
Nkwenye banyere laser ọnwụ igwe
Ihe ngosi na ozi ọzụzụ
Laser ịcha vidiyo center
Kacha ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ maka laser ọnwụ igwe
3KW 1500x6000mm eriri laser ọnwụ igwe
Ihe cutter laser dị ọnụ ala
Obere cutter laser - 500x500mm
Ụgbọ ala table laser ọnwụ igwe
Igwe ọkụ igwe dị elu nke igwe laser
15000W 2500x8000mm eriri laser ọnwụ igwe
Fiebr laser ọnwụ igwe na-enweghị mkpuchi
1500w mpempe akwụkwọ na ọkpọkọ ọnwụ igwe
Mpempe akwụkwọ na tube laser ọnwụ igwe
1500w tube laser ọnwụ igwe
Pipe laser ọnwụ igwe na akpaka loading na ebutu
Nnukwu ọkpọkọ laser ọnwụ igwe
Angel ọkpọkọ laser cutter
Igwe eji egbutu laser akpaaka
Igwe ncha mpempe akwụkwọ akpaaka nwere nchekwa
Igwe eji egbutu eriri igwe laser
Mfe eriri igwe laser ọnwụ igwe
Igwe na-ewepu nchara nchara
Ihe eji eme ihe laser
Igwe eji egbutu ihe mkpuchi ihe mkpuchi laser
Igwe eji egbutu eriri igwe Laser igwe
Obere Laser Cutter — 500mmx500mm
Cutter Laser dị ọnụ ala
Auto loading na unloading metal eriri laser ọnwụ igwe maka mpempe akwụkwọ metal
Uru pụrụ iche ● Tebụl mgbanwe, Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ akpaaka na ebutu, na-echekwa oge. ●Elu-nchekwa n'ụzọ zuru ezu-gbachiri shei Ọdịdị. ●Nhazi nke usoro nchekwa mpempe akwụkwọ pụrụ iche na-abawanye nchekwa nchekwa. ● German ROR rack na pinion na-ewetakwu nkwụsi ike. ●CNC usoro, ngwa ngwa na-arụ ọrụ ọsọ. Atụmatụ ● Mma doo àgwà: nta lekwasịrị anya ntụpọ, finer ọnwụ ahịrị, ezigbo ịkpụ, mara mma ọdịdị, ọ dịghị distortion, elu ọrụ arụmọrụ, na mma nhazi àgwà; ●C...
1.5KW 2KW 3KW 4KW 6M ogologo ígwè ọkpọkọ tube Laser ọnwụ igwe
Igwe eji egbutu ihe nkedo 6m metal Tube CNC Laser kacha mma
Ngwa meterial: CS/SS/AL/CU/Galvanized ígwè tube
Ụdị Chuck: abụọ 220mm pneumatics ma ọ bụ twp 350 pneumatic chucks
Igwe ihe eji egbutu ihe eji eme ihe igwe Laser Fiber Laser Cutter kacha mma maka ire ere
Atụmatụ: ∎ Mma beam ka mma: obere ntụpọ elekwasị anya, ahịrị ịkpụcha mma, ịkpụ dị mma, ọdịdị mara mma, enweghị mgbagha, arụmọrụ dị elu nke ọrụ, yana mma nhazi ka mma. ■ Nkwụsi ike dị elu: iji laser fiber, nhazi kọmpat, obere nha, ụzọ anya anya, obere ume ike, ịdị mma ịkpụ. ■A naghị egbochi ụzọ anya anya, nkwụsị nke nnyefe eriri anya dị ntakịrị, na nhazi nhazi nwere ike ịbawanye elu. ■ Ọnụ ego mmezi dị ala: enweghị gas na-arụ ọrụ laser; Optical fib...
Tube Fiber Laser Cutter Machine 6m Pipe Laser Cutter
Igwe ọkụ laser zuru oke zuru oke nke na-adabere na pneumatic chuck arụ ọrụ siri ike siri ike nkọwapụta nkọwapụta maka ịcha ọkpọkọ gburugburu, tubes rectangle na tubes nwere ụdị. Gburugburu ọkpọkọ: 20 ~ 219mm Square Pipe: 20 ~ 150mm Ogologo nke ọkpọkọ: 6m ihe bara uru Ọnọdụ Ihe Ọhụrụ / Metal Processed Brass / Copper, Igwe anaghị agba nchara, Carbon Steel, Aluminom Alloy, Alloy, Aluminum Cutting Thrickness (mm) 6 Video nleba anya na-apụ apụ Wepụtara mkpesa nnwale igwe enyere Ma...
Ike dị elu 3 chuck CNC Laser Cutting Machine Metal Tube Laser Cutter
Atụmatụ: ■Chuck nwere ọrụ etiti na-achịkwa onwe ya; ■ Na ọrụ nchọta etiti akpaaka; ■Egbutu nri nkewa iji kwalite izi ezi nke ịkpụ; ■ Nhazi atọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nkedo nke etiti etiti nwere ike inye aka n'ịgbazi nrụrụ nke obere ọkpọkọ ma melite nkwụsị nke ọma; ■ Zero ọdụ n'iyi, ihe dị elu ruo mgbe ọnụego ; Ihe Nlereanya Ngwaahịa 2060 Max kacha egbu egbu 60m/min X/Y Ndokwa nke ọma...
1000W 1500W 2000W Laser Welder Portable Laser Weld Machine nke ezigbo ọnụ ahịa
Njirimara ngwaahịa: ● Ịchekwa ọrụ, ngwa ngwa ngwa ngwa, arụmọrụ dị elu na ọnụ ala dị ala ●Arụ ọrụ dị mfe ma dị mfe ịmụta, na-achọ ahụmahụ ọrụ dị ala, ọ dịghị achọ ndị na-arụ ọrụ nkà, ma dị mfe ịnweta. Ndị na-arụ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ịgbado ọkụ ma ha nwechara ọzụzụ bụ isi, ndị novice nwekwara ike ịgbado welds mara mma. ● The na-aga n'ihu laser doo nwere ezi àgwà na elu ike njupụta. Ọsọ ịgbado ọkụ karịrị okpukpu abụọ nke ịgbado ọkụ laser YAG siri ike yana ugboro 3-5 nke ịgbado ọkụ argon arc. Na l...
Mpempe akwụkwọ ọla na ọkpọkọ 1530 CNC Fiber Laser Cutting Machine 1500W Dual User
Keywords: Mpempe akwụkwọ na ọkpọkọ laser laser ọnwụ igwe igwe CNC laser ọnwụ igwe ● Ezubere maka mpempe akwụkwọ na ọkpọkọ. ● Akụkụ eletrik: Schneider. ● Ekwe nkwa afọ 20 nke eji eme ihe na-enweghị nrụrụ. Ngwunye ngwaahịa kacha egbutu ngwa ngwa 120m/min Laser Power 1500W-4000W Max Acceleration 0.8G Power Consumption 10KW X/Y Nkwadebe nke ọma ±0.08mm/m Igwe na-agba ọsọ okpomọkụ 0℃-40℃ X/Y Ugboro ugboro na-agba ọsọ Machineing0.05mm ...
Igwe mpempe akwụkwọ China CNC fiber laser ọnwụ igwe
Ike: 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W
Otu tebụl size: 1500x3000mm / 2000x4000mm / 1500x6000mm
Mgbanwe tebụl size: 1500x3000mm / 2000x4000mm/ 2000x6000mm
Isi ịkpụ: Raytool (autofocus) / WSX (autofocus)
Isi iyi Laser: IPG (akara German)/ Raycus(China ika)
China emeputa nke 350mm Chuck 6m Big ọkpọkọ laser ọnwụ igwe
Ụdị tube: ọkpọkọ okirikiri, square, rectangle, oval, triangle na ọkpọkọ C
Tube size na arọ: 20-320mm gburugburu ọkpọkọ, 220 * 220mm square ọkpọkọ，Nbudata kacha:
Otu ọkpọkọ Max. arọ:280kgs
Isi ịkpụ: Raytool (autofocus)
Ụdị chucks abụọ (onye na-akwado nbudata nhọrọ)
Chuck ihu: Pneumatic
Azụ Chuck: Pneumatic
Ụlọ ọrụ na-ere China metal Laser Cutter nwere mkpuchi mkpuchi zuru oke & tebụl ụgbọ mmiri
Ike: 1500W ~ 6000W
Nha tebụl: 1500x3000mm / 2000x4000mm / 2000x6000mm
Isi ịkpụ: Raytool-autofocus
China Ezigbo ọnụ maka 160T3200 ngwakọ Electric cnc breeki pịa
1000w 1500w 2000w 3000w Raycus IPG Raytool autofucus 1500 × 3000 na 6m anwụrụ ọnwụ Multi ọtọ laser ọnwụ igwe.
Nha tebụl: 1500x3000mm+3m/6m
Adreesị: No.30 Hongyue Road, Hongshan Street, New District, Wuxi, Jiangsu Province, China